UKUNGENISWA: iqonga elitsha lolawulo lwedatha yendawo-iGeofumadas
Ikhaya/Ezahlukeneyo/UKUNGENISWA: iqonga elitsha lolawulo lwedatha yendawo
Kuhlelo lwe-6 Iphephancwadi iTwingeo, sikwazile ukunika incasa yeyiphi iqonga elitsha lokunikezelwa kwedatha yolawulo lwedatha IStudiyo esingatyhilwanga. Eli qonga lokuyila, ukusukela ngoFebruwari 1, 2021, lisenza abantu ukuba bathethe ngezixhobo ezinokubakho zokuphathwa kunye nokulawulwa kweeseti zedatha enkulu.
Ithetha ngendlela abadali bayo abaqale ngayo ukuyiphuhlisa le projekthi de ibe yinto ebonakalayo kwi-Unfolded, esekwe kumthombo ovulekileyo wobuchwephesha be-geospatial efana ne-kepler.gl, deck.gl kunye ne-H3. Iqonga elineyona njongo iphambili kulawulo olusebenzayo lweDatha eNkulu, kunye nolwakhiwo lokuphela kunye nokujikeleza okukhawulezayo ukwenza iiseti zedatha enkulu. Inkqubo engundoqo isekwe kubuchule be-H3 obunamacala egridi.
Le gridi ye-H3 yinkqubo yesalathiso se-geospatial, kwaye ngalo mhlaba umhlaba wohlulwe waba ziiseli zodidi lweethayile, iseli nganye kwezi inokwahlulwahlulwa ibe njalo njalo. Yaphuhliswa ngu-Uber yokubonwa kunye nokwenziwa ngcono kwedatha yendawo, kunye nolawulo lwentengiso eguqukayo-yokubonelela kunye nemfuno.
Kwi-Unolded unokwenza iimephu ngonqakrazo olumbalwa, kunye nakwibhrawuza. Ngeempawu ezisi-8 ezisisiseko, iStudiyo esiSombulweyo esivulekileyo sivumela:
Yenza iimephu ngaphandle komzamo
Umboniso omkhulu wokuhlola
Uhlalutyo olunamandla lwe-geospatial ukunceda abasebenzisi bafumane ukuqonda
Ukugcinwa kwelifu kwedatha yendawo
Ukucofa okukodwa kwimephu
Ukungena ngokulula kweefomathi zedatha yendawo
Ukuzenzekelayo ukufumana idatha ngaphakathi nangaphandle kwesixhobo
Iindlela zokwenza izicelo zesiko kwiimephu
Abasunguli abangatyhilwanga u-Isaac Brodsky, u-Ib Green, u-Shan He no-Sina Kashuk baphuhlise ubuchwephesha be-geospatial njenge-kepler.gl, i-deck.gl, kunye ne-H3 ngaphezulu kwesiqingatha seminyaka kwaye ngoku bajoyine imikhosi yokuvuselela uhlalutyo lwe-geospatial.
Ukusuka kwiakhawunti kaGoogle okanye ngokungena kwi-imeyile, iprofayile iyilelwe ukuqala ukwenza iimephu. Ngokunjalo, kunokwenzeka ukudibanisa iindawo zokusebenza okanye izixhobo zolawulo lweqela ezinje nge "Slack". Ngokunjalo, kukho ipaneli yolawulo lwedatha efini, yonke idatha efakwe kwiqonga yabucala, kude kube ngumsebenzisi ofuna ukuyaba nge-URL, incoko, i-imeyile, umfanekiso weskrini okanye inethiwekhi yoluntu (i-twitter, i-LinkedIn, i-Facebook okanye Reddit).
Abathengi beshishini banokufikelela kwidatha kwiqonga elingatyhilekanga ngeDatha ye-SDK- iREST API - ngesikhangeli sewebhu okanye imiyalelo ethile. Le SDK ivumela ukudityaniswa kwemephu, idatha, iinkonzo kunye nokuhamba komsebenzi. Ikwaququzelela ukwenziwa kwemephu ezipapashiweyo, unxibelelwano okanye izitayile kunye nokubonelela ngolawulo kwidatha ebonisiweyo okanye hayi kwimephu.
Xa unxibelelana neqonga, ujongano kunye nokusebenza okunikezelwayo kuyachazwa, kunye nokwahluka kwawo kwii-GIS ze-desktop zemveli ezinjengeArcGIS okanye iQGis umzekelo. Idibanisa onke amandla e-GIS aqhelekileyo kunye neetekhnoloji ezintsha kunye nezinto ezintsha.
I-Studio engatyhilwanga ayenzelwanga iimeko zesiko ze-GIS. Ijolise kuhlalutyo olukhulu lwedatha kunye nasekuxazululeni iingxaki ezinzima ze-geospatial ngokwembono zesayensi kunye nabahlalutyi.
Iimpawu ezinje ngohlalutyo lokwexeshana zichaziwe, zibalulekile xa unedatha enye okanye ezingaphezulu kwaye ufuna ukubona ngotshintsho ngokukhawuleza nangopopayi. Kwangokunjalo, ukubanakho kokwenza olu hlalutyo lwethutyana kubandakanyiwe eqongeni.
Ngokunjalo inqaku lishiyeke apho abasunguli be-Unfolded basebenzisana nabasebenzisi babo ukufumana kubo ingxelo engcono ekusebenzeni kweqonga. Kwangokunjalo, baqhubeka nokuzama ukuze babandakanye izixhobo okanye izinto ezintsha ezenza amava atyebise nangakumbi.
Kwelinye icala, kwabo batsha kwi-Unfolded, banethuba lokujonga kwakhona izifundo ezihambelana noku: ukongeza idatha kwiimephu, ukuphononongwa kwedatha, umanyano lwedatha okanye oopopayi. Liqonga elithembisa ukuzisa isimanga esikhulu kwindawo yokuhlalutya idatha yendawo.
Okungakumbi kukukumema ukuba ufunde olu hlelo lutsha lweTwingeo Magazine. Siyakhumbula ukuba sinomdla wokufumana amaxwebhu okanye iimpapasho onqwenela ukuzibonisa kwiphephancwadi. Nxibelelana nathi nge-imeyile editor@geofumadas.com kunye edit@geoingenieria.com.. Imagazini ipapashwa kwifomathi yedijithali-jonga apha-Ulinde ntoni ukukhuphela iTwingeo? Silandele kwi-LinkedIn ukuze ufumane ezinye iinkcukacha.
IDiploma-iNgcali yoLwakhiwo lwe-BIM
GRAPHISOFT yandisa i-BIMcloud njengenkonzo yokufumaneka kwehlabathi